उपनिर्वाचन : दोहोरिएला त वाम गठबन्धनको राप ? - NepalKhoj
उपनिर्वाचन : दोहोरिएला त वाम गठबन्धनको राप ?
नेपालखोज २०७६ असोज २८ गते ११:३८
२८ असोज २०७६, काठमाडौँ । विसं २०७० को संविधानसभा चुनावमा जिल्लाका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्र जितेको नेपाली काङ्ग्रेसले विसं २०७४ को चुनावमा भने सबै क्षेत्र गुमायो । काङ्ग्रेस पराजयको प्रमुख कारण थियो, वाम गठबन्धन ।
तत्कालीन नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चा गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिएको थियो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यमा एकलौटी जित हासिल पनि भयो । चुनावपछि एमाले–माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो ।
तीन दलको गठबन्धन दुईमा झ¥यो । क्षेत्र नं २ (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित राष्ट्रिय जनमार्चाका टेकबहादुर घर्तीको निधन भएपछि उक्त क्षेत्रमा आउँदो मङ्सिर १४ मा उपचुनाव हुँदैछ । दलहरु आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन् । तिहारपछि चुनावी अभियानलाई तीव्र पार्दैछन् ।
गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्दा गएको चुनावमा वाम दलले सजिलै जित निकालेका थिए । भारी मतान्तरमा काङ्ग्रेसका उम्मेदवारले हार व्यहोरेका थिए । उपचुनाव हुने क्षेत्र नं २ ९ख० मा राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवार टेकबहादुर घर्तीले ११ हजार ८८४ मत पाउनुभएको थियो ।